I-Country Cottage kufutshane nesixeko.
Sheeptown, Northern Ireland, United Kingdom
Ipropathi ibekwe emaphandleni kumgama nje omizuzu esi-7 ukusuka kwiziko leSixeko saseNewry. Ilungele iLizwe lasekhaya lihamba ixesha elifutshane ukuya eTowpath naseAlbert Basin Walkway kunye nemizuzu engama-25 kuphela yokuqhuba ukuya eSlieve Gullion okanye kwiMournes.
Indawo yokuhlala yangoku yangaphakathi ine-Wi-Fi, i-smart TV kunye nokulala kamnandi ezintandathu. Iindwendwe zinokufikelela kwigadi enkulu, indawo yepatio kunye nendawo yokupaka iimoto. Ipropathi ibekwe kwindawo ezolileyo yelizwe kufutshane nesixeko, ilungele ukuhlala usapho/iqela
Ipropathi isandula ukulungiswa kwaye ifaka iindonga zamatye zangaphakathi kunye nesitovu se-belly esinembiza yokuhlwa okupholileyo. I-intshi ye-50 ye-smart TV ine-Sky efakiwe. Ikhitshi libandakanya i-oveni, ihob, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba. Kukho indawo yepatio ngaphambili nangasemva kwesakhiwo apho iindwendwe zinokuphumla kwaye ziphumle ngeembono zamaphandle ajikelezileyo.
Le ndawo ikwindlela yelizwe ezolileyo kodwa iimayile ezi-3 ukuya esixekweni. Isixeko sineekhefi ezininzi kunye neendawo zokutyela, iihotele ezimbini, iindawo zokuthenga ezinkulu ezi-2 kunye ne-cinema ye-omniplex.
Ipropathi ibekwe ecaleni kwendlu yethu kwaye yabelana ngendlela enkulu efanayo. Iindwendwe zingaqhakamshelana nababuki zindwendwe ngefowuni nange-imeyile. Kudla ngokubakho omnye wethu kwindawo yokunceda iindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo ukuba kuyimfuneko.
Ipropathi ibekwe ecaleni kwendlu yethu kwaye yabelana ngendlela enkulu efanayo. Iindwendwe zingaqhakamshelana nababuki zindwendwe ngefowuni nange-imeyile. Kudla ngokubakho omnye we…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sheeptown